Medjugorje: Nwaanyị anyị gwara anyị otu aga-esi zọpụta nkụda mmụọ
Paolo Tescione	Edere ya June 30, 2020 June 30, 2020
Mee 2, 2012 (Mirjana)
Ezigbo ụmụaka, jiri ịhụnanya nne m na-arịọ unu: nye m aka gị, kwe ka m duzie gị. Mụ onwe m, dịka nne, chọrọ ịzọpụta gị na enweghị izu ike, ndakpọ olileanya na ndụ ebighị ebi. Ọkpara m, na ọnwụ ya n’elu obe, gosiri ka ọ hụrụ gị n’anya, o jiri onwe ya chụọ aja maka gị na maka mmehie gị. Ajụla aja ya ma emekwala ka ahụhụ ya dị ọhụrụ na mmehie gị. Emechila ụzọ nke eluigwe. Umu m, egbula oge. Ọ dịghị ihe dị mkpa karịa ịdị n’otu na Ọkpara m. Aga m enyere gị aka, n'ihi na Nna nke Eluigwe na-ezite m ka anyị wee nwee ike igosipụta ụzọ amara na nzọpụta nye ndị niile na-amaghị Ya. Adala mba n’obi. Tụkwasị m obi na-akpọ isiala nye Ọkpara m. Mụ m, unu enweghị ike ịga ebe na-enweghị ndị ọzụzụ atụrụ. Ka ha nọrọ n’ekpere gị kwa ụbọchị. Daalụ.
br> Akụkụ ụfọdụ sitere na Bible nke pụrụ inyere anyị aka ịghọta ozi a.
Jen 1,26: 31-XNUMX
Chineke wee sị: "Ka anyị kpụọ mmadụ n'onyinyo anyị, n'ọdịdị anyị, ma chịkwaa azụ nke oke osimiri na anụ ufe nke eluigwe, anụ ụlọ, anụ ọhịa niile na anụ ufe niile na-akpụ akpụ n'ụwa". Chineke kere mmadụ n’onyinyo ya; n’onyinyo Chineke ka O kere ya; nwoke na nwanyi ka emere ha. 28 Chineke gọziri ha wee sị ha: “Mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, jupụta ụwa; wedata ya ma chịkwaa azụ nke oké osimiri na anụ ufe nke eluigwe na ihe ọ bụla dị ndụ nke na-agagharị agagharị n'ụwa ”. Chineke wee sị: “Lee, enye m gị ihe ọkụkụ ọ bụla nke na-amị mkpụrụ, nke dịkwa n'ụwa nile na osisi ọ bụla dị na ya, nke na-amị mkpụrụ: ha ga-abụ nri gị. Anụ ọhịa niile, na anụ ufe niile nke eluigwe na anụ ufe niile nke na-akpụ akpụ n'ụwa, nke ọ bụkwa ume ndụ, m na-azụ ahịhịa ndụ niile. ” O wee mee. Chineke we hu ihe O mere, ma, le, ọ di nma nke-uku. Ọ bụ mgbede, ọ bụkwa ụtụtụ: ụbọchị nke isii.
Nke gara aga Post Gara aga post:Nkwuputa taa 30 June 2020: ebere nke Jesus
Next Post → Post ozo:Ndị mmụọ ozi Guardian nwere obi na mkpụrụ obi: ha chọrọ inyere anyị aka na otu esi arịọ maka ya